Madaxweyne Geelle oo ka hadlay kulanka berri dhexmari doona Somaliland iyo Somali | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweyne Geelle oo ka hadlay kulanka berri dhexmari doona Somaliland iyo Somali
Madaxweyne Geelle oo ka hadlay kulanka berri dhexmari doona Somaliland iyo Somali
Madaxweynaha Dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in uu maalinta beri ah guddoomin doono kulan dhex mari doona Madaxweyneyaasha Somaliland iyo Soomaaliya oo ka dhacaya caasimada dalkiisa.
Madaxweyne Geelle ayaa sidaasi ku seegay qoraal kooban uu ku baahiyey bartiisa Twitter-ka, waxaanu intaasi ku daray in kulanka uu ku casuumay in uu ka qaybgalo Reysalwasaaraha Dalka Itoobiya Abiy Axmed.
“Berri, waxaan dalka Jabuuti ku guddoomin doonaa kulanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, si aan horey ugu sii wado dadaallada dhex-dhexaadinta labada hoggaamiye. Waxaan sidoo kale ku casuumay ra’iisul wasaare Abiy Ahmed inuu ka qeyb-galo wada-hadallada”ayuu yidhi Geelle oo aan bixin faahfaafintaasi ka badan.
Somaliland iyo Soomaaliya midna wax war ah kama soo saarin wadahadallada beri dhacaya oo la sheegay in Maraykanku soo qaban qaabiyey.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kulan la yeeshay madaxd asxaabta Mucaaridka ee dalka, waxaanu kala tashaday ka qaybgalka shirkaasi.
Previous articleXisbiyada Somaliland ee mucaaridka oo ku kala aragti duwan safarka Madaxweyne Biixi
Next articleWadahadalka dhexdhexaadinta ah ee Somaliland iyo Soomaaliya